Ahoana ny fampiasana PC roa misy fampisehoana iray (HDMI switch) 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Raha miasa betsaka amin'ny solosaina isika, manamboatra, mitantana fivarotana solosaina, na manoratra lahatsoratra misy lohahevitra ao amin'ny bilaoginay manokana, dia mety hitranga fa manana birao roa sy monitor iray hampiasa azy roa isika. Amin'ity tranga ity dia tsy asaina mampiasa tariby HDMI iray ianao ary mamindra azy amin'ny solosaina iray mankany amin'ny iray hafa raha ilaina satria tsy mora idirana foana ny seranan-tsambo HDMI, ary koa mahasosotra ny fampiasana ireo solosaina roa miaraka. Amin'ny maha manam-pahaizana momba ny IT tsara antsika dia afaka miloka amin'ny tsara isika HDMI duplicator famantarana O HDMI switch, mahavita mitantana onjam-peo / horonan-tsary roa misaraka ary mandefa azy ireo amin'ny monitor tokana ananantsika, misafidy tanana ny solosaina izay hanome ny laharam-pahamehana ny efijery mifototra amin'ny zavatra tsy maintsy ataontsika amin'ny fotoana marina.
Amin'ity toro-lalana ity dia hasehoko anao ny fomba fanomanana solosaina roa hizarana monitor iray, safidio tsara ireo tariby 3 HDMI hampiasaina sy izay switch tokony hampiasaina amin'ireo maodely misy amin'ny Amazon. Amin'ny toko voatokana iray dia ho hitantsika ihany koa ny fomba fampiasana switch USB, hahafahantsika mamily ny fitaovana fampidirantsika (kitendry sy totozy) amin'ny solosaina iray mankany amin'ny iray hafa amin'ny fomba tsotra.
VAKIO IZAO: Tantano ny mpanara-maso roa amin'ny solosaina PC
Ahoana ny fampiasana PC roa miaraka amin'ny monitor iray
Mba hamoronana ity tontolo iaraha-mizara ity dia mazava ho azy fa tsy maintsy manana monitor iray isika, PC roa raikitra na solosaina roa misy natiora (na PC sy solosaina finday na PC na Mac Mini aza), telegrama HDMI telo misy halava mifanentana sy switch. HDMI afaka mitantana renirano HDMI tsy miankina roa sy mamoaka output iray, izay hahatratra ny seranan-tsambon'i HDMI an'ny monitor. Raha mbola tsy nividy solosaina vaovao izahay dia manome sosokevitra anao ny hamakianao ireo torohevitra sy tetika rehetra ao amin'ny torolalana ho anay Zavatra tokony ho fantatra alohan'ny fividianana solosaina vaovao.
Misafidiana tariby HDMI mety
Ho an'ity fanaingoana ity dia mila tariby HDMI telo isika: ny iray amin'ny solosaina izay ho fantatsika ho "PC 1", ny iray hafa ho an'ny solosaina izay hiantsoantsika hoe "PC 2" ary farany ny tariby HDMI farany, izay hampifandray ny fivoahan'ny HDMI an'ny switch mifidy amin'ny monitor anay .
Raha te hametraka ny switch eo amin'ny birao isika, ny tariby roa amin'ny PC 1 sy PC 2 dia tokony ho lava (farafaharatsiny 1,8 metatra), mba hanaronana ny elanelana misy eo amin'ny PC nentim-paharazana roa. Ity ambany ity ny lisitr'ireo tariby HDMI mety amin'izany.
Rankie Haingam-pandeha HDMI Cable, Nylon voafandrika, 1,8m (€ 6)
Kavina HDMI HDMI 4 metatra SUCCESO (€ 2)
Raha te hampifandray ilay switch amin'ny monitor isika dia afaka mampiasa tariby kely kokoa (1 metatra na latsaka), haka toerana kely araka izay azo atao eo amin'ny birao, mametraka ny switch koa eo ambanin'ny monitor (na eo amin'ny fotony). Etsy ambany isika dia afaka mahita andiana tariby HDMI fohy.
Mazava ho azy fa manana fahalalahana tanteraka amin'ny fikirakirana isika: afaka misafidy telegrama lava telo isika, tariby fohy roa ary tariby fohy na lava na telo aza, arakaraka ny toerana sy ny haben'ny solosaina mifandray. Ny hany zava-dehibe dia mahazoa tariby HDMI tsara kalitao telo alohan'ny hanohizana ny torolàlana sisa. Raha tsy fantatray ny fanafohezan-teny miaraka amin'ny tariby HDMI, mamporisika anao izahay hamaky ny fanadihadianay lalina Ahoana ny fisafidianana tariby HDMI mety.
Safidio ny switch switch HDMI
Rehefa avy nahita ny tariby HDMI hampiasaina izahay dia tonga amin'ilay fitaovana mamela anao hanova loharanom-pahitalavitra eo anelanelan'ny solosaina roa miaraka amin'ny tsindry bokotra: switch HDMI.
Io fitaovana kely io dia mamela anao mampifandray tariby HDMI roa ho fampiasa ary manome output HDMI (output) tokana, izay halefa any amin'ny monitor. Raha te hifamadika amin'ny PC iray mankany amin'ny iray hafa dia ny manindry azy fotsiny no tokony hataontsika Bokotra switch eo an-tampony (matetika miaraka amina LED manjelanjelatra roa hamantarana haingana ny loharano mavitrika), hivadika eo anelanelan'ireo PC roa mifandray ary tsy hampiseho afa-tsy ny horonan-tsary amin'ilay solosaina tadiavina eo amin'ny monitor. Ireto ambany ireto dia nanangona ny switch HDMI tsara indrindra azonao vidina amin'ny Amazon amin'ny vidiny mifaninana tokoa.
Switch Techole HDMI (€ 12)
Rehefa mividy ny iray amin'ireto fitaovana ireto isika dia alao antoka fa nitovy izy ireo switch switch HDMI na hanohana ny "2 fivoahan'ny-1"Raha tsy izany dia atahorana ny mividy fitaovana mitovy nefa hafa tanteraka toa nySplitter HDMI, izay mamela ny mpanara-maso roa hifandray amin'ny PC iray ihany (tranga iray tena samy hafa izay ametrahantsika ny torolàlana manontolo).
Ankehitriny fa manana izay ilaina rehetra isika mba hahafahantsika mampifandray ireo solosainantsika roa amin'ny monitor iray tokana dia afaka miroso amin'ny fananganana farany isika: ampifandraiso amin'ny mpampisaraka, tariby sy solosaina ny tariby HDMI, alefa ny monitor ary ampodio ny iray amin'ireo solosaina roa (na roa): ny switch HDMI dia hivezivezy irery amin'ny alàlan'ny alàlan'ny tariby HDMI ary amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra dia afaka misafidy isika na jereo ny horonantsary avy amin'ny PC 1 na PC 2; ka ny zava-drehetra dia miharo bebe kokoa ary afaka manaraka ny dingana amin'ny fitarihana ihany koa isika Mitendry totozy sy fitendry hifehezana solosaina roa na maromaro, mba hahafahanao mizara totozy sy fitendry eo anelanelan'ny solosaina roa (tena hanana switch roa izahay, iray HDMI ary USB iray). Ny HDMI switch dia azo ampiasaina koa mampifandray konsole roa amin'ny fahitalavitra Izy io dia manana seranana HDMI tokana, noho izany dia azonao atao ny manararaotra azy roa nefa tsy mila manova TV (fandaniana lafo kokoa).
Raha te hampiasa mpanara-maso roa mifanila amin'ny solosaina iray izahay, amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo HDMI amin'ny karatra horonantsary natokana ho azy, dia mamporisika anao izahay hamaky ny torolalanay Ahoana ny fampifandraisana monitor roa amin'ny PC mi Fanamboarana efijery roa ao amin'ny Windows 10 hiasa miaraka amin'ny mpanara-maso roa.
Raha tsy manana seranan-tsambo HDMI ny monitor ananantsika dia fotoana tokony hanovana azy io ho an'ny iray vao haingana kokoa, mifidy eo amin'ireo maodely hita ao amin'ny mpitari-dalana antsika Ny mpanara-maso PC tsara indrindra azo vidiana eo anelanelan'ny 100 sy 200 Euros mi Mividiana 21: 9 Wide Monitor (Ultra Wide Screen).
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny fifandraisana amin'ny Mac
Ahoana ny fomba hamoronana serivisy fanontana birao
Ahoana ny fomba ahafahana mampiasa virtualization ao amin'ny BIOS, ho an'ny milina virtoaly haingana kokoa
Ahoana ny fanamboarana ny lesoka BSOD (0xc00000e) ao amin'ny Windows 10
Tsy misy taratra USB Flash na fiara ivelany hita - Vahaolana rehetra
Zahao ny asan'ny Windows miaraka amin'ny tantaran'ny hetsika
Ahoana ny fomba handaminana ny lahasa amin'ny Windows
Ahoana ny fomba hijerena ny Windows Printer History
Mampihena ny fividianana entana amin'ny Windows mba manatsara ny fandefasana horonantsary
Mitantana fanaraha-maso roa amin'ny PC desktop desktop
Ahoana ny fomba hangina ny PC
Microsoft .NET Framework, amboary ny fametrahana ary esory ireo lesoka